Na-akwado Nkwado na-enweghị Ere mkpụrụ obi gị | Martech Zone
Wednesday, September 26, 2012 Na Tọzdee, Septemba 25, 2012 Douglas Karr
-enweghị nkwado, anyị ga-enweghị ọtụtụ nke a blog. Nke ahụ pụtara na ị na-erite uru site na ndị na-akwado anyị! Site na nkwado nkwado, anyị nwere ike ịga n'ihu na-emeziwanye atụmatụ nke saịtị ahụ, wepụta nsụgharị mkpanaka na mbadamba, nwee pọdkastị siri ike ma gaa n'ihu na-arụ ọrụ na atụmatụ ọhụrụ - dị ka ịmegharị mmemme email na ịnweta ngwa mkpanaka ọhụrụ. N’ahịa ahụ, n’ezie, na-enyekwara ndị na-akwado anyị aka ka anyị na-aga n’ihu na-eto ma na-enwe ọganihu.
Ntinye ego ahụ na-akwụ ụgwọ. Anyị nwere ndị na-akwado ya ugbu a ma anyị etolitela nke ọma. AdAge ugbu a na-akwado anyị 79th n'ụwa mgbe ọ na-abịakwute blọọgụ ahịa… ọ bụghị oke ihere na ihe ruru ọnọdụ 100 n'afọ gara aga! E nwekwara ọtụtụ blọọgụ na ndepụta ahụ na-adịghị elekwasị anya n'ahịa ka anyị wee nwee obi ụtọ maka mmezu ahụ.
Nkwado, rue ugbu a, abụkwala ọrụ kacha eweta uru anyị rụtụrụla. Ọ bụ ezie na mgbasa ozi na-enye ọtụtụ narị dollar, nkwado na-enye ọtụtụ puku. Otú ọ dị, ọ bụghị ọrụ dị mfe. Ndị nkwado anyị na-enweta nlekọta dị nro, ịhụnanya. Site na infographic design, marketing consulting, kwuru na ihe ngosi na nbudata anyị, yana ebe ọ bụla ọzọ anyị nwere ike ịkọ ngwaahịa na ọrụ ha… anyị na-eme. Anyị anaghị enweta ndị nkwado na-emegiderịta onwe ha. Ozugbo mmadụ kwadoro otu, ha nwere nkwado ahụ ogologo oge ha chọrọ.
Ọ bụ ezie na anyị lekwasịrị anya n'ịhụ na ndị na-akwado anyị nwere ihe ịga nke ọma, anyị anaghị ere mkpụrụ obi anyị.
Ndị na-agụ blọgụ anyị dịka, na-akwado ma na-eso n'ihi na anyị ewulite ntụkwasị obi na ikike n'ime oghere ahịa. Nke ahụ pụtara na, ebe anyị chọrọ ijide n'aka na ndị na-akwado anyị ga-eme nke ọma, anyị kwesịrị ịkpachara anya banyere ihe ole na ole:
Anyị garịrị eme ya gosipụta mgbe niile na enwere mmekọrịta akwụ ụgwọ na ndị na-akwado anyị. Anyị na-arụ ọrụ iji hụ na ọ bụla aha nwere okwu “ahịa” na ya… hụ na ndị na-ege anyị ntị maara na ha bụ ndị ahịa.
Anyị kwesịrị ịkpachara anya banyere ndị na-akwado anyị nwere. Anyị akpachara anya ka anyị ghara ịnye ndị ụlọ ọrụ nkwado omume, ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ na-enyo enyo.
Anyị ga-anọgide onye na-ere ahịa enweghị okwukwe mgbe ọ na-abịa ịkọ akụkọ ruru eru banyere ụlọ ọrụ. Ọ bụrụ na ndị asọmpi anyị nke ndị na-akwado anyị malitere atụmatụ dị egwu, anyị ga-eme ka ndị na-ege anyị ntị mara.
Ọ bụrụ n’anyị itinye otu n’ime ihe ndị a n’ihe egwu, anyị nwere ike ịhapụ ntụkwasị obi na ikike anyị were afọ iri wuo. Ma ọ bụrụ na anyị atụfu ntụkwasị obi na ikike a, anyị agaghị enwe ndị na-ege anyị ntị. Ma ọ bụrụ na anyị efunahụ ndị na-ege ntị, anyị ga-atụfu ndị na-akwado ha! Enweghị m nsogbu ọ bụla ịkọwaara onye na-akwado m ihe kpatara m ji kesaa ozi na ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ nke nwere akụkọ akụkọ.
N'oge na-adịbeghị anya, ana m agwa onye na-ede blọgụ ọbịa nke nnukwu ụlọ ọrụ blog nke na-agaghị ebipụta post nke ya n'ihi na o megidere onye na-akwado ha. Anaghị m agụ blog ahụ ọzọ. Ọ bụrụhaala na onye na-ede blọgụ na-agọnahụ ya, agaghị m agụ ya ọzọ. Ha tufuru ihe kacha m mkpa… ntụkwasị obi na ikike m chere na ha nwere. Otu iku, ha apụla.
Adịla ire mkpụrụ obi gị maka onye nkwado!
Tags: marketingteknụzụ ahịaOnye nkwadonkwado